आखिर सुशान्तको खाताबाट कहाँ गयो पैसा ? खाताबाट १५ करोड निकालिएको प्रमाणित,
मुम्बइ। सुशान्त सिंह राजपुतको खाताबाट उनकी गर्लफ्रेण्ड रिया चक्रवर्तीले १५ करोड रुपैयाँ निकालेर हिनामिना गरेको विषयमा प्रवर्तन निर्देशनालयले गरेको अनुसन्धानमा यो रकम सिधै रियाको खातामा नगएको पाइएको छ । यद्यपि सुशान्तको एउटा बैंक खाताबाट करिब १५ करोड रुपैयाँ निकालिएको भने पुष्टि भएको छ ।
अब निर्देशनालयले यो रकम कहाँ–कहाँ गयो भन्ने विषयमा अनुसन्धान सुरु गरेको छ । मुम्बइ मिररको रिपोर्टअनुसार सुशान्तका कैयौं खाताबाट इन्टरनेट बैंकिङ र डेबिट कार्डबाट भएको ट्रान्जेक्सनको जाँच भइरहेको छ । इडी सूत्रका अनुसार यसरी ‘म्यापिङ’ गरेर पैसा कहाँ गयो र त्यो पैसा कुन प्रयोजनको लागि गयो भन्ने पत्ता लाग्नेछ ।
इडीले सुशान्त रिया र उनका भाइ शोभिक चक्रवर्तीसँग व्यवसायमा सहकार्य गर्न कसरी आए भन्ने पनि अनुसन्धान गरिरहेको छ । सुशान्तको लगानीमा स्थापित २ कम्पनीहरु फ्रण्ट इण्डिया वर्ल्ड फाउण्डेशन र भिभिडवेज रियालिटी एक्स प्रा.लि. का निर्देशक रिया र उनका भाइ शोभिक छन् ।
प्रकाशित मिति August 14, 2020